५ बर्षका बालकले गाए ट्राफिक संग सम्बन्धित जनचेतनामुलक गित (भिडियोमा हेर्नुहोला ) – Complete Nepali News Portal
August 27, 2017	2,894 Views
झापा । गित संगीत जिबनको अभिन्न अंग हो । गित संगीतले मानिसलाई हरेक कुरामा अप्र्ताक्च्या अपरतक्क्ष्य रुपले फाइदा पुराएको हुन्छ आजकल नेपाली सङ्गीत को बजार राम्रो हुँदै गएको छ ।
आजकल धेरै नया गायक गायिका हरुको आगमन हुनु ले नेपाली सङ्गीत प्रती सबै को मोह बढेको देखिन्छ । अहिले भइरहेका रियालिटी कार्यक्रम हरुले समाज मा राम्रो सन्देश दिएको पाइन्छ । यसै क्रम मा आफ्ना बालबालिका हरुलाइ नि अहिले गीत सङ्गितमा अभिभावकहरुले सपोर्ट गरेको देखिन्छ ।
ट्राफिक जनचेतनामूलक मुलक एउटा गीत अहिले पाँच बर्षका बालक ए .आर . बुढाथोकीले गाएका छन । सन्तोष सापकोटा को शब्द अनि टंक बुढाथोकीको सङ्गीत रहेको उक्त गितमा ए .आर . बुढाथोकीले स्वर दिएका छन् । हेरौ ५ बर्षका बालकले कस्तो गाएका छन् त ?